January 2016 ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
2:54:00 AM Computerka No comments
Daawo Cashir ku saabsan sida loo jabiyo hadii uu mopilka kaaga xirmo Password runtii cashirkaan in aan so diyariyo waxa igu kalifay markii aan arkay dad badan oo ka cawanaayo arinkaan.
Soomaaliya Fadaraal ma’udanbaa mise waa udib udhac!?(Warbixin-Qalinkii Rashka)
10:20:00 PM Qormooyin No comments
Dadka soomaalieed waxa ay yeeshteen ama heleen rajo wanagsan taasi oo ka maqneed tan iyo markii ay meesha ka baxday Dowladii dhaxe ee Soomaaliye balse taasi waxaad moodaa in ay dib usoo laabaneyso isla markaana shacbiga soomaaliyeed ay muujinaayaan u heelanaan ay u heelan yihiin dowlad loo dhan yahay in uu Dalkeena yeesho.
Dhanka kale waxaad moodaa in rajadaasi wanaagsan oo shacab weynaha soomaaliyeed lahaa in ay ceel ku sii dhaceeso ayadoona loo nisbeenaya ama sababtu tahay “Fadaraal” hadaba muxuu yahay Fadaraal Dowladu maxaa u diiday in shacabkeeda ku dhawaad 20-sano madluun sanaa in ay ka dhaadhiciso waxa uu yahay Fadaraalka su’aasha jirta waxa ay tahay Muxuu fadaraalka keenay ma dhib mise dheef mudadaan yare e aan aragno.
Dhab ahaantii soomaaliya kuma wacna in laga hir galiyo fadaraal balse ka soo qaad ayadoo laga hir galiyay Dalka Waxa dhacday in dowlada ay u martay jid qaldan ayadoona sameysay ama ku dhaqaaqday in ay aqoon satay Maamulo sheegtay in ay sameysteen Maamul Gobaleed taasi oo keentay in Maamulo kale ay sheegtaan in ay sameesteen iygana ayadoona taasi ay keentay in uu halkaasi ka dhashay is qab-qabsi balaaran oo wali aan xal dhab ah laga gaarin .
Taa waxa ka daran waxa ay shacabka qaar ama odayaasha qaar ay Fadaraalkii ka dhigeen Qabyaalad waxaadna maqleysa Beel hebal odayaasheda uma dhama Beel hebel Waa lagu yareyay xumnahay u matalaayo Beel hebal Go'aan ay ka gaartay ila laga soo dhamestiro Sadkii aan ku laheen Maamulkaas.
Hadaba maxaa Dowlada la gudboon
Xalka dhabta ah oo ay dowlada soomaaliya ka gaari karto waa ayadoo la timaada siyaasad cad taasi oo ah mid lagu qanci karo walibana ka maran musuq maasuq isla markaaana Dowlada mowqifkeeda yahay mid cad ayadoona eegeyso danaha shacabka soomaaliyeed iyo dastuurka qaranka.
Waxbadan ka ogoow Faa'iidoyinka iyo Waxtarka ay leedahay dhirta (Qalinkii Rashka)
10:07:00 PM Tichnlogy-yada No comments
Dalkeena soomaaliya waxa ka baxa dhir farabadan taasi oo leh qeybo kala duwan isla markaana Fa’iido badan u leh Dadka Soomaaliyeed .
Dhirta ka baxda Dalkeena hooyo waxa ay leedahay waxtar aad u weyn waxaana ka mid ah:
1-Dhirta waxa aan ka helnaa Cuno
2-Dhirta waxa aan ka sameysanaa Hooy ama meel aan ku hoyono
3-dhirta waxaan ka helnaa ama aan ka sameysanaa Dhar
4-Dhirta waxa aan ka helnaa qoryaha aan dabka ku karsano IWM
Dabcan dhirta waxa ay inoo leedahay faa’iidooyin kala duwan taasi oo aanan lagu soo koobi Karin qormadaan aan ku eegeyno waxtarka dhirta.
Dhanka kale waxa jira dad caadeystay in ay jaraan ama Gooyaan dhirta si ay uga shidaan Dhuxul ayagoona mar-marsiyo ka dhiganaayo in ay yihiin shaqo la’aan.
Hadaba maxa ka dhalan karo hadii la jaro Dhirta Dalka ama laga shito Dhuxul.
Hadii la jaro ama la gooyo dhirta ka baxda Dalkeena hooyo waxa ka dhalan karo dhibaatooyin farabadan taasi oo ay sabab u tahay jarista la jaray Dhirta waxaana kamid ah:
1-Dhirta oo la jaro waxa ay keentaa Nabaad Guur ku yimaado Deegaanka
2-Dhirta oo la jaro waxa ay keentaa Roobka oo yaraado
3-dhirta oo la jaro waxa ay keentaa Dabeelaha oo bata
4-Dhirta oo la jaro waxa ay keentaa in Daadadka roobka ay dhibaateyaan Bulshada ku dhaqan Deegaan-ka. IWM.
Hadaba anagoo ka duuleyna arimahaasi aan kor kusoo xusnay maxaa la gudboon Bulshada si looga hortago dhibaatooyinka ay leedahay jarista dhirta sidoo kale makula tahay in hadii laga wacyi galiyo dadka jara dhirta in ay joogsaneyso jarida dhirta isla markaana loo abuuri karo shaqooyin ka wanaagsan tan ay hada hayaan.
Ma ogtahay in ay jiran websityo wax laga barto isla markaana si Free ah aad aqoontada uga kororsan kartit?
2:55:00 AM Cashiro-Computer, Tichnlogy-yada No comments
Aqiyaarta aan hawada ku saxiibnayoow maanta waxaan halkaan idiin kugu haya websityo dhoor ah kuwaasi ood aqoon ka korarsan doontit si free ah..
Hadaba halkaan hoose ka eeg webka aad doontit iyo macluumad ku saabsan adeega uu bixinayo waxa ayna u badan yihiin kuwa IT Programing.
xuquuqda qoraalka waxa leh webka waxbarashada ee www.ardaykaabcom
Wax kabaro dhamaan shortcats ka ama xarfaha laso gaab-gabiyay Keyboard-ka
2:42:00 AM Cashiro-Computer No comments
Aqiyarey halkan waxaan idiin kugu haya dhamaan keyboard shortcatska
Ka bagasho wacan
App Rearrangement Shortcuts (Metro)